Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » kariska » 2021 Top 10 Goobaha Cunnooyinka Caalamiga ah ayaa shaaca laga qaaday
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Cuntada aan ku raaxeysano fasaxa waa mid ka mid ah sababaha badan ee aan u jecel nahay safarka.
Aaway meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay dadka jecel cuntada?
Aaway Michelin-kii ugu fiicnaa ee jilay, cuntada waddooyinka iyo meelaha kulul ee cunnooyinka?
Khubaradu waxay falanqeeyeen magaalooyinka waaweyn ee adduunka dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin Michelin makhaayadaha caanka ah, noocyada cunnada ee la heli karo, meelaha cuntada waddooyinka, iyo% maqaayadaha vegan / khudradda.
Laga soo bilaabo cuntada dariiqyada ee suuqyada ajaanibta ah ee mashquulka badan ilaa maqaayadaha caanka ah ee ku yaal maqaayada caanka ah ee Michelin, cuntada aan ku raaxeysano fasaxa waa mid ka mid ah sababaha badan ee aan u jecelnahay safarka.
Laakiin meeye meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay dadka jecel cuntada? Iyo meeye Michelin-kii ugu fiicnaa ee jilay, cuntada waddooyinka iyo meelaha kulul ee cunnooyinka?
Khubarada warshadaha safarka waxay falanqeeyeen magaalooyinka waaweyn ee adduunka dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin maqaayadaha caanka ah ee Michelin, noocyada cunnada ee la heli karo, meelaha cuntada lagu iibiyo, iyo% maqaayadaha vegan / khudradda si loo muujiyo meelaha ugu wanaagsan ee laga cuno.
Magaalooyinka Dunida ugu Fiican ee Foodies:
Kaalinta kowaad sida magaalada ugu cuntada fiican adduunka ay tahay Bern, Switzerland oo heshay dhibco dhan 6.34. Bern wuxuu dhibco badan ka helay tirada makhaayadaha Michelin Guide ee laga heli karo magaalada 100,000kii qof ee deggen wuxuuna leeyahay tiro isbarbardhig ah oo xulashooyinka cuntada waddooyinka ah ee cabirka magaalada.
In kasta oo ay yartahay, Magaalada Luxembourg waa meesha labaad ee ugu wanaagsan ee cunnada laga helo, halkaas oo lagu kasbaday dhibco dhan 6.30. Magaalada caasimada ah ee wadanka la midka ah waa goob kulug leh cunnooyinka wanaagsan iyo cunooyinka maxaliga ah, markaa hubi inaad u tixgaliso fasaxaaga xiga ee Yurub.
Bruges, Ku garaacista sida Florence iyo Venice kaalinta saddexaad, waa meel fiican oo lagu booqdo cunnooyinka macaan ee ilkaha. Wufleyaasha iyo shukulaatooyinka ay Belgium caanka ku tahay labadaba waxaa laga heli karaa qaddar fara badan magaalada oo dhan.